Miisaanka oo hoos udhaca: Nooca miisaanka lumay miisaanka ayaa kugu habboon?
Miisaanka oo hoos udhaca: Nooca miisaanka lumay miisaanka ayaa kugu habboon?
/blog/Lorcaserin , Orlistat , Sibutramine/Miisaanka oo hoos udhaca: Nooca miisaanka lumay miisaanka ayaa kugu habboon?
Posted on 01 / 06 / 2018 by 阿斯劳 ku qoray Lorcaserin, Orlistat, Sibutramine.
Miisaanka oo yaraada dhakhso: Nooc noocee ah ayaa budo lumis ah oo kugu habboon adiga?
aasaas blog navigation
1.Wax barkeed dufan 2.Sibutramine HCL budada
3.Sidee buu waxtar u leeyahay budada sibutramine HCL daaweynta buurnaanta? 4.Sibutramine HCL Doos ah
5.Orlistat budada 6.How Miyuu Orlistat Shaqada Mastaradda?
7.Common Qeybta Orlistat Powder 8.Lorcaserin budada
9.How effective waa budada Lorcaserin / Belviq? 10.Qiyaasta guud ee dadka waaweyn ee dawada Lorcaserin budada
11.Waxaa laga iibsadaa budada miisaanka luminta (sibutramine hcl powder, orlistat powder, Lorcaserin powder) khadka tooska ah?
1.Wax barkeed dufan
Miisaanka luminta, marka la eego daawada, caafimaadka ama jirdhiska jidh ahaaneed, waxaa loola jeedaa hoos u dhaca wadarta guud ee jidhka, sababtoo ah dareeraha luminta jirka, dufanka jidhka ama unugyada adipose ama cufan, sida macdanta lafaha, muruqyada, , iyo unugyo kale oo isku xiran.
Miisaanka oo yaraada wuxuu u dhici karaa si aan ula kac ahayn nafaqo-xumo ama cudur salka ku haya ama wuxuu ka imaan karaa dadaal miyir leh oo lagu hagaajinayo xaalad dhab ah ama loo maleynayo inuu culus yahay ama cayilan yahay. Miisaan lumis “aan la sharxin” oo aan sababin hoos u dhigista kaloriinta ama jimicsiga waxaa loo yaqaan 'cachexia' waxaana laga yaabaa inay calaamad u tahay xaalad caafimaad oo daran. Miisaan lumis ula kac ah ayaa badanaa loo yaqaan 'slimming'.
Dareemayaal badan ayaa dooran kara qaar ka mid ah daawooyinka dietinta si ay u kantaraan miisaankooda, xitaa aad u xiiseynaya inay lumiyaan miisaanka, dad badan ayaa qaadan doona miisaanka oo yaraada budo yareynta miisaanka, si loo gaaro ujeedka miisaankooda lumay, sida sibutramine hcl, orlistat, Lorcaserin…
Xaqiiqdii, steroids-ka miisaanka lumiya, oo si wanaagsan u xakamayn kara miisaanka, waxay u horseedi karaan aragti wanaagsan muddo gaaban. Bal aan eegno budada miisaanka lumay mid mid.
2.Sibutramine HCL budada
Sibutramine HCL ayaa laga saaray suuqyada Uk 2010 sababo amni awgood. Sibutramine HCL waxaa loo yaqaanaa in si weyn loo kordhiyo cadaadiska dhiigga iyo / ama garaaca wadnaha ee qaar ka mid ah bukaanada waxaana dhici karta inay halis weyn u tahay bukaanka qaba taariikhda cudurka halbowlaha wadnaha, qalooca wadnaha oo xiran, qalalaaso, ama istaroog. Waxyaabahan ayaa sidoo kale dhex mari kara, siyaabaha nolosha halis u ah, daawooyinka kale ee bukaanku qaadan karo.
Xitaa haddii sibutramine HCL uu leeyahay waxyeelo halis ah, weli wali waa mashiinno badan oo miisaanka lumay, qalabka ugu muhiimsan ee la isticmaalo, sida miisaanka miisaanka culus, cabitaanka cuntada, jelly, iwm, in miisaanka lumiyo ay ka baxdo isticmaalka sibutramine HCL.Ku darista sibutarine-ka ee sibutarka ah ee HCL ee alaabtani waxay kaa caawin kartaa wanaajinta wakhtiga daawada iyo in macaamiisha ka caawiyaan sidii ay u gaari lahaayeen rabitaanka miisaanka.
3.Sidee buu waxtar u leeyahay budada sibutramine HCL daaweynta buurnaanta?
(Budada Meridia) budada loo yaqaan "Sibutramine HCL" waxay saameyn toos ah ku yeeshaan maskaxda sida tallaabada ugu horreysa ka dib qaadashada budada Meridia. Maadaama nidaamka dareenka ay u dhaqmaan sidii xarun lagu xakameyn lahaa dhammaan dhaqdhaqaaqyada jidhka ee jidhka, waxay noqotaa mid muhiim u ah kiniinka si uu u qaado tallaabooyinkeeda maskaxda. Meridia waxay la xiriirtaa kiimikada nidaamka dareenka ee saameyn toos ah ku leh miisaanka jirka.
Kiniinka waxaa lagu soo jeediyay khabiiro in loo qaato sida isku dhafan ee raashinka maalinlaha ah si loo arko natiijooyinka dhabta ah ee wakhti cayiman. Cayilka waxaa laga helaa in uu keeno dhibaatooyin kale sida kor u kaca cadaadiska dhiigga, iyo arrimaha kale ee caafimaadka sida sonkorowga. Cunto qaadashada waa in ay ahaato kaloori yar oo ay weheliso habka jimicsiga haboon.
(Budada Meridia) ee budada loo yaqaan "Sibutramine HCL" ayaa lagu ogaadaa inay tahay mid aad waxtar u leh daaweynta buurnaanta maadaama daawadu awood u leedahay inay hoos u dhigto cilladda dheeriga ah ee jirka si tartiib tartiib ah ugu faafta muddo. Haddii barnaamijka miisaanka luminta uu weheliyo cunto habboon iyo daawo sax ah sida budada Meridia waxay u horseedaysaa hoos u dhac ku yimaada culeyska jirka iyo sidoo kale wuxuu furaa marinka cad ee nolosha caafimaadka leh.
Cayilka waa dhibaatada sida caadiga ah loo soo sheego ee saameysa dad badan, waxaana sidoo kale fahansan bukaannada sida ay u adagtahay in ay daadiyaan miisaanka xad-dhaafka ah. Marka jirku leeyahay miisaan xad dhaaf ah waxa uu noqonayaa mushkilad joogta ah shakhsi ahaan si loo sameeyo hawlo fudud. Iyadoo buurnaan ahaan loo yaqaanno dhibaatada ugu weyn, arimaha kale ayaa sidoo kale ku soo boodi kara jidhka isla markaana dadka oo dhan waxyeello u geystaa guud ahaan.
4.Sibutramine HCL Qiyaasta budada
Qiyaasta Caanaha Qaangaarka ah ee Caanaha
Sibutramine ayaa si iskood ah uga baxay suuqa Soomaliya by soo saaraha bishii Oktoobar, 2010 sababtoo ah xogta tijaabada bukaan-socodka oo muujinaysa khatarta sii kordheysa ee wadno-qabadka iyo istaroogga. Macluumaadka qiyaasta soo socda ayaa quseeya marka daroogada laga heli karo Maraykanka.
Qadarka hore: 10 mg afka ah hal mar maalintii.
Qiyaasta caadiga ah ee cayilida ee cayilka
Daraasado cilmi baaris ah oo ku saabsan sibutramine kuma jirin tiro bukaan ah oo ka badan da'da 65 da'da. Sibutramine ayaa ka horjeeda kooxahan bukaanka ah.
Qiyaasta caadiga ah ee carruurta ee cayilka
Iyadoo ku saleysan hal daraasad (n = 60)
14 sanado 17:
Orlistat, sidoo kale ogaadaan sida xijaabka loogu talagalay magaca calaamadda, waa daawo loogu talagalay in lagu daaweeyo cayilka. Hawlgalkeeda asaasiga ah waxay ka hortagtaa in la nuugo dufanka ka yimaada cuntada aadanaha, taas oo yareyneysa qaadashada kalooriga, Ka dibna caawimaad si aad u gaarto dufanka. kala duwanaanta sibutramine iyo Clenbuterol.
6.How Miyuu Orlistat Shaqada Mastaradda?
Budada Orlistat waxay ka shaqeysaa gudaha mindhicirka (xiidmaha). Orlistat waxay u shaqeysaa iyada oo ka hortageysa enzymes (lipases) inay jabiso dufanka mindhicirka oo u oggolaato inay u dhex marto jirka oo aan la dhicin. Tani waxay iyana yaraynaysaa tirada kalooriyada ee jidhku nuugo. Qiyaasta lagu taliyey ee ah 120 mg saddex jeer maalintii, Orlistat waxay yareyneysaa nuugista dufanka boqolkiiba 30. In kasta oo Orlistat ay tahay daawo miisaan lumis wax ku ool ah leh, ma ahan miisaanka miisaanka luminta ama liistada. ...Orlistat waxay wax ku ool u tahay ka hortagga baruurta nuugista cuntadaada taas oo kaa caawin doonta inaad yareeyso wadarta qaadashada kalooriga. Waxaa lagugula talinayaa in aad gooysid qiyaasaha cuntada ee ku saabsan qiyaasta 500 maalintii.
7.Common Qeybta Orlistat Powder
Orlistat wuxuu ahaa afka oo loo isticmaalo koofiyad iyo kumbuyuutar aan loo baahnayn. Qiyaasta lagu taliyey ee Orlistat waa hal 120-mg (capsule) hal mar, saddex jeer maalintii. Qaado liiska wakhtiga cuntada ama ilaa saacadda 1 kadib cuntada. Haddii cuntada la waayo ama aan lahayn baruur, waxaad ka boodi kartaa xadigaaga. Raac tilmaamaha ku qoran calaamadda dawadaada ama calaamadda jumlada ah si taxaddar leh, oo weydii dhakhtarkaaga ama farmashiistaha inaad sharaxdo qayb kasta oo aadan fahmin. Qaado liiskan sida loogu talagalay. Ha u qaadin wax ka badan ama ka yar ama u qaado inta badan inta uu dhakhtarkaagu kuu qoray ama ku qor xirmada.
Waa maxay sababta daawadan loo qoray? Maaddaama cayilku noqdo mid caadi ah noloshii casriga ahaa, luminta hilibka Lorcaserin ayaa soo saarey. Lorcaserin, sida Orlistat, waxay heshay FDA ee 1999, waxaa loo isticmaalay in lagu caawiyo dadka qaangaarka ah ama kuwa culeyskoodu sarreeyo oo leh miisaan culus oo la xidhiidha miisaanka oo lumiyo miisaankana ha ahaado. Lorcaserin wuxuu ku jiraa daawo loo yaqaano serotonin receptor agonists.Lorcaserin waa in loo isticmaalo cunto yar oo kalooriye ah iyo qorshe jimicsi.
9.How effective waa budada Lorcaserin / budada barafkaq?
Sida laga soo xigtay xogta kiliinikada ah ee ay Arena soo gudbisay FDA, ku dhowaad kala badh dieterkarrada aan sonkorowga 2 ee isticmaala daawada ayaa lumay ugu yaraan 5% miisaankooda bilowga - ama celceliska 12. - in ka badan hal sano, marka la barbardhigo 23% ee kuwa qaata koontada. Natiijada ugu fiican, dieter-yada waxaa lagula talinayaa in ay isticmaalaan daawada si wadajir ah cunto caafimaad leh iyo barnaamij jimicsi. Calaamadda la aqoonsan yahay ee Belviq waxay sidoo kale ku talinaysaa in dadka ay joojiyaan daroogada haddii ay ku guul daraystaan ​​in ay lumiyaan 5% miisaankooda jirka ka dib todobaadka XNUM; Daaweynta dheeraadka ah waxaa laga yaabaa inaanay keenin miisaan lumis ah.
10.Qiyaasta guud ee dadka waaweyn ee dawada Lorcaserin budada
Qiyaasta lagu taliyey ee budada lorcaserin ee maaraynta culeyska waa 10 mg laba jeer maalintii.
Dawadan ku qaado afka koob biyo ah. Raac tilmaamaha ku qoran warqadda daawada. Waad ku qaadan kartaa adiga oo aan cunin ama aan lahayn. Dawadaada u qaado si joogto ah. Si taxaddar leh u raac tilmaamaha ku qoran calaamadaha laguu qoray. Ha u qaadan inta badan inta lagu faray. Ha joojin qaadashada marka laga reebo talooyinka dhakhtarkaaga.
Isticmaal: La qabsasho cunto yar oo kalooriye ah iyo firfircoonida jidhka oo kordhay maaraynta culeyska miisaanka ee bukaanka qaba miisaanka bilowga hore ee jirka (BMI) ee 30 kg / m2 ama ka weyn (cayil) OR 27 kg / m2 ama ka weyn (miisaanka) joogitaanka ugu yaraan hal miisaan culus oo la xidhiidha culeyska sareeya, sida hypertension, nooca 2 diabetes mellitus, ama dyslipidemia.
11.Waxay ku iibsan karaan budada miisaanka lumay (sibutramine budada hcl, budada orlistat, budada Lorcaserin) online?
Booqo farmashadayada internetka oo buuxi a dalbashada budada miisaanka. Qeexaan meesha ay gaarsiinayaan, tirada alaabta iyo habka lacag bixinta. Xilliga daqiiqadaha 30, waxaad heli doontaa xaqiijinta amarkaaga. Waxaa la geyn doonaa maalmaha shaqada 10.
Tags: Budada Lorcaserin, Dufanka Orlistat
Iskuulada Olistat ma nabdoon tahay oo wax ku ool ah?
Budada Lorcaserin: Wax walba oo ku saabsan daroogada lumida
(MK-677 Powder) Talooyinka Ibugamoren Isticmaalidda budada	Budada Stanozolol ee dhiska jirka: 16 xaqiiqooyinka waa inaad ogaatid !!!